Filannoo Itoophiyaa 2021 irratti taateewwan yaaddessoo 300 ol mirkaneeffachuusaa gamtaan waldaalee siiviilii hime – Kichuu
HomeNewsAfricaFilannoo Itoophiyaa 2021 irratti taateewwan yaaddessoo 300 ol mirkaneeffachuusaa gamtaan waldaalee siiviilii hime
Gamtaan Waldaalee Siiviilii filannoo Itoophiya irratti ibsa baase
Gamtaan Waldaalee Dhaabbilee Siviilii Itoophiyaa Filannoof taajjabbii filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa Itoophiyaa irratti taasiserratti gabaasa jalqabaa baasera.
(bbc)—Gamtaan waldaaleen biyya keessaa 176 walitti dhufuun hundeessan Gamtaan Waldaalee Dhaabbilee Siiviilii Itoophiyaa Filannoof naannolee filannichi itti adeemsifame torba fi bulchiinsa magaalotaa lama keessatti adeemsa filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa taajjabuusaa himeera.
Gabaasni jalqabaa gamtichi har’a baases gabaasa taajabdootnisaa lakkoofsaan 2,200 ta’an buufataalee filannoo 2,000 ol taajjabuun qopheessan ofkeessatti kan qabate ta’uu himeera.
Taajabdoota bobbaase 2,200 kunneen keessaa dhibbeentaan 97 Waxabajjii 14 bara 2013 ganama buufataalee filannoo seenanii akka taajjaban kan heeyyamameef ta’uu kan himu gamtichi “akkaataa seera filannoo keessatti kaayameen faallaatti buufataalen filannoo 92 gamoowwan waajjiraaleen poolisii, kaampiiwwan waraanaafi paartileen siyaasaa keessatti argaman keessatti hundeeffaman” jedheera.
Gama biraatin gamtichi buufataalee filannoo taajjabe keessaa dhibbeentaa 99.8 keessatti korojoowwan yookin saanduqootni waraqaan filannoo keessa kaayamu duwwaa ta’uunsaanii erga mirkanaa’e booda saamsamanii filannoon eegalamuusaa himeera.
Haata’u malee guyyaa filannootti buufataalee filannoo 256ti daangaa meetira 200 keessatti duulli na filadhaa taasifamuufi meeshaaleen duula na filadhaa agarsiisan mul’achuu isaanii gabaasni jalqabaa Gamtaan Waldaalee Dhaabbilee Siiviilii Itoophiyaa Filannoof baase agarsiisa.
Akka seera filannoo Itoophiyaatti filannoof guyyootni afur yeroo hafanirraa eegalee duula nafiladhaa taasisuun dhorkaadha.
Gama biraatin buufataalee filannoo gamtichi taajjabe keessaa dhibbeentaa 89 kan ta’an guyyaa filannoo iddoo bakka bu’ootni paartilee siyaasaa argamanitti kan banaman ta’u gamtichi himeera.
Adeemsa sagalee kennuu…
Gamtaan Waldaalee Dhaabbilee Siiviilii Itoophiyaa Filannoof buufataalee filannoo 1,975 keessatti adeemsa sagalee kennuu taajjabus buufataalee filannoo 12 keessatti garuu taajjabdootnisaa adeemsa sagalee kennuu taajjabuu dhorkamusaanii himeera.
Buufataalee filannoo taajjabe keessaa dhibbeentaa 96 keessatti wayita sagaleen kennamu qaamolee buufaticha keessatti argamuu qaban qofti argamusaanis himeera.
Sagalee kennuun walqabatee gamtichi “buufataalee taajjabdootnikoo itti argaman keessaa buufataalee 366 keessatti filattootni filachusaanin dura qalamni hin gadhiisne quba isaaniirratti hin dibamne” jedheera.
Kana malees “buufataale filannoo 198 keessatti icciitiin addemsa sagalee kennuu haala guutuu ta’en hin kabajamne” jedheera.
Filannichi bifa nagaqabeessa ta’een adeemsifamuunsaa waan gaarii ta’uu kan himu Gamtaan Waldaalee Dhaabbilee Siiviilii Itoophiyaa Filannoof, tumsi boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa gama hulaawwan mul’atan duuchuf yaaluutin taasise kan jajjabeeffamu ta’uusaas himeera.
Filattootni baay’een filannicharratti hirmaachusaanin dabalataan sagalee kennuf abdiidhaan eegaa turuunsaanii akkasumas tumsi paartileen siyaasaa filannichi nagahaan akka xummuramuf taasisanis olaanaa ta’uu gabaasni jalqabaa gamtichaa hima.
Taajabdootni bobbaase taateewwan yabaddessoo 400 gabaasuu isaanii kan himu Gamtaan Waldaalee Dhaabbilee Siiviilii Itoophiyaa Filannoof, kunneen keessaa 338 qulqulleessuufi mirkaneessuusaa himeera.
“Hanqinni meeshaalee filannoo, taajabdootni akka hin taajjabne taasisuu, namootni buufataale filannoo keessatti argamuu hin qabne buufataalee filannoo keessatti argamuufi wayita sagaleen kennamufi lakkaa’amu sodaachisuufi qoccollaan taateewwan yaaddessoo guyyaa filannoo mul’atan keessaayi” jedha gamtichi.
Gamtichi taajabdootnisaa baajii (waraqaa beekkamtii) Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa qaban 40 adeemsa filannoo akka hin taajjabne dhorkamusaanii himeera.
“Taajjabdootni gamtichaa naannoo Amaaraatti bobba’an iddoowwan tokko tokkotti bulchaa gandaa dabalatee hojjettootni bulchiinsa gandaa yeroo filannootti buufataalee filannoo keessatti argamaniiru” jedha gabaasni jalqabaa Gamtaa Waldaalee Siiviilii Itoophiyaa Filannoof har’a baase.
Dabalataan gamtichi “naannolee Gambeellaafi Amaaraa iddoowwan muraasatti miseensootni partilee siyaasaa filattootaafi raawwachiistota filannoo sosodaachisaa akka turan taajabdootnikoo naaf gabaasaniiru” jedheera
Kana malee Gareen taajjabdootaa Gamtaa Afrikaa filannoon Itoophiyaa marsaa 6ffaan hanqinoota hedduu qabaatus karaa amanamummaa qabuun gaggeeffamuu isaa taajjabeera jedhe gabaasa jalqabaa baaseen.
Gareen taajjabdoota Gamtaa Afrikaa gabaasa jalqabaa kanaan filannichi hanqinoota loojistikiifi nageenyaa, dhiibbaa siyaasaafi of eeggannoo dhabuu weerara koroonaavaayirasii irraa kan hafe qophiiwwan filannoon duraa fi guyyaa filannoo wantootni hojjetaman karaa seera qabeessa, naga qabeessaa fi amanamummaa qabuun raawwatan jedhe.